Jabuuti oo Iibsanaysa Saamiga Shirkadda DP World Ku leedahay Dekeda Dooraale | SAHAN ONLINE
Jabuuti oo Iibsanaysa Saamiga Shirkadda DP World Ku leedahay Dekeda Dooraale
Dekeda Jabuuti ee Dooraale ee Kunteenarada laga dejiyo
ABIJAN–Agaasimaha suuqa xorta ah iyo dekeda Jabuuti Abubakar cumar Xaadi oo waraysi siiyay wakaalada Reuters, wuxuu sheegay in dowladda Jabuuti ay qorshaynayso inay iibsato saamiga shirkadda DP World ay ku leedahay dekeda Dooraale si ay uga hortegto muranka dhinaca sharciga ah.
Wuxuu sidoo kale sheegay in dowladda Jabuuti ay wadahadal kula jirto shirkada laga leeyahay dalka faransiiska oo dhinaca dekedaha qaabilsan oo lagu magacaabo CMA CGM, shirkadan waxaa ay dhisi doontaa Deked cusub oo qiimaheedu uu ku kacayo 660 Milyan oo dollar.
Mudane Haadi oo ka qaybgalaya shir ka dhacayay Wadanka Ivory Cost, wuxuu tilmaamay in Dekeda cusub iyo suuq xor ah oo laga hirgaliyay Jabuuti,ay ka faa’iidaysanayaan wadamada geeska afrika iyo wadamada ku yaala bartamaha iyo bariga afrika.
” Jabuuti waxay kaloo dhisaysaa Garoon diyaaradeed oo Caalami ah oo qiimaha ku kacaya uu dhan yahay $350 milyan oo dollar, Garoonkan waxaa loo adeegsan doonaan diyaaradaha waaweyne ee Kaargooga ah” sidaas waxaa yiri Abubakar .
Jabuuti oo ku taala dhul istraatiiji ah, waxaa saldhigyo milateri ku leh Wadamada Maraykanka, shiinaha, Jabana iyo wadanka faransiiska oo hore u gumaysan jiray dalkaasi.